China Hight Quality Steel Structure Plant orinasa sy mpanamboatra | Kejulixin
Steel rafitra zavamaniry eo amin'ny fiainana ny fampiasana bebe kokoa, ary mbola somary matanjaka, satria ny vy firafitry ny trano, ka ity karazana rafitra rafitra vy orinasa ho azo ampiharina kokoa, ary mbola tena malefaka tsy toy ny mahazatra trano ihany no azo raikitra amin'ny ity toerana ity, ka ny fampiasana ny toerana maro, dia azo ampiharina amin`ny faritra lehibe ny orinasa, trano fanatobiana entana sy ny toerana hafa. Ny rafitra vy tsara amin'ny orinasa dia tombony maro.
Steel Structure Plant endri-javatra dia
1, hery ara-materialy avo, ny lanjany maivana
Ny vy dia manana hery ambony sy modulus avo lenta. Raha ampitahaina amin'ny simenitra sy ny hazo, ny hakitroky sy ny tanjaky ny tanjaky ny tahan'ny dia somary ambany, ary noho izany ny rafitra vy eo ambanin'ny adin-tsaina mitovy toe-javatra ny singa amin'ny hazo fijaliana-fizarana kely, maivana lanja, mora ny fitaterana sy ny fametrahana, mety amin'ny elany lehibe, avo. haavony, rafitra mitondra entana mavesatra.
2, henjana vy, plastika tsara, fitaovana fanamiana, azo itokisana ara-drafitra avo
Mety amin'ny fiantraika sy enta-mavesatra mavitrika, miaraka amin'ny fahombiazan'ny seismika tsara. Ny rafitra anatiny vy dia homogeneous, vatana homogeneous isotropic. Ny tena fiasan'ny rafitra vy dia mifanaraka kokoa amin'ny teoria kajy. Noho izany dia avo ny fahamendrehan'ny rafitra vy.
3, ambaratonga ambony ny mechanization ny vy rafitra famokarana sy ny fametrahana
Ny singa firafitry ny vy dia mora amboarina ao amin'ny orinasa ary mivory eo amin'ilay tranokala. Ny famokarana mekanisma amin'ny orinasan'ny singa firafitry ny vy dia manana fepetra avo lenta, fahombiazana amin'ny famokarana avo lenta, fivorian'ny tranokala haingana ary vanim-potoana fanorenana fohy. Ny rafitra vy no karazana rafitra indostrialy indrindra.
4, tsara famehezana fampisehoana ny rafitra vy
Satria ny rafitra welded dia azo fehezina tanteraka, dia azo atao amin'ny fanerena avo lenta, dobo solika lehibe, fantsona fanerena, sns miaraka amin'ny entona tsara sy ny rano.
5. Ny firafitry ny vy dia mahatohitra hafanana ary tsy mahatohitra afo
Rehefa latsaky ny 150 ℃ ny mari-pana dia miova kely ny toetran'ny vy. Noho izany, ny firafitry ny vy dia mety amin'ny atrikasa mafana, fa rehefa ny ambonin'ny rafitra dia iharan'ny hafanana taratra eo amin'ny 150 ℃, hafanana insulation lovia tokony hampiasaina mba hiarovana azy. Rehefa ny mari-pana dia 300 ℃ -400 ℃. Ny tanjaky ny vy sy ny modulus ny elasticité dia mihena be, ary ny tanjaky ny vy dia mirona ho aotra rehefa manodidina ny 600 ℃ ny mari-pana. Ao amin'ny tranobe misy filàna fiarovana manokana amin'ny afo, ny rafitra vy dia tsy maintsy arovana amin'ny fitaovana mahatohitra afo mba hanatsarana ny haavon'ny afo.
6、mahantra harafesiny fanoherana ny vy rafitra
Indrindra fa ao amin'ny tontolon'ny hamandoana sy ny media manimba, dia mora harafesina sy harafesina. Amin'ny ankapobeny, ny rafitra vy dia tokony ho de-rusted, galvanized na hosodoko, ary tazomina tsy tapaka. Ho an'ny firafitry ny sehatra an-dranomasina amin'ny rano an-dranomasina, ny fepetra manokana toy ny "zinc block anodic protection" dia tokony horaisina mba hisorohana ny harafesina.
7, Low-carb, mitsitsy angovo, maitso, azo ampiasaina indray
Ny fandravana ny rafitra vy dia tsy hamokatra saika fako fanorenana, ary ny vy dia azo averina sy ampiasaina indray.
teo aloha: Tilikambon'ny Tube Tilikambon'ny Power Angle Tower
Manaraka: Lalana fiambenana vita amin'ny lalambe vita any Chine
fanorenana rafitra vy tafo
trano fanorenana vy vita amin'ny vy
Rafitra andry vy
Atrikasa fanorenana vy
Toby fiambenana (Tsanganana fiambenana)
Mpamatsy Cap Guardrail Galvanized